Odayaasha reer Hiiraan oo lagu wado in ay la kulmaan Wasiirka Arrimaha Gudaha | Dhacdo
Home Wararka Maanta Odayaasha reer Hiiraan oo lagu wado in ay la kulmaan Wasiirka Arrimaha...
Odayaasha reer Hiiraan oo lagu wado in ay la kulmaan Wasiirka Arrimaha Gudaha
Wararka ka imaanaya Magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in uu socdo dadaalo lagu doonayo in xal loogu helo xiisadda ka taagan magaaladaasi.
Odayaasha Dhaqanka ayaa waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Mukhtaar Xuseen Afrax ee Khamiistii gaaray magaaladaasi.
Ujeedka wafdiga ayaa lagu sheegay, xal u helidda khilaafka ka dhashay doorashadii 11-kii bishii hore ee November ka dhacday Magaalada Jowhar, Madaxweynaha Hirshabelle-na loogu soo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Odayaasha Dhaqanka ayaa maalmihii la soo dhaafay ka biyo diidanaa in ay la kulmaan Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed), oo muddo toddobaad ah ku sugan Magaalada Beledweyne.
Dadka reer Hiiraan ayaa waxay diidan yihiin in Madaxweynaha Hirshabelle uu ka yimaado Gobolka Shabellaha Dhexe, isla-markaana ay Jowhar noqoto Xarunta Maamulka Hirshabelle, taasoo liddi ku ah bay yiraahdeen hannaanka awood qaybsiga beelaha Hirshabelle.
Villa Somalia ayaa la aaminsan yahay inay gadaal ka riixeyso qorshaha xalka loogu raadinayo deganaanshaha siyaasadda ee Hirshabelle, waxaana soo baxaya warar sheegaya in hadda uu socdo qorshe lagu doonayo in Beledweyne loogu aqoonsado Xarunta Hirshabelle.
Beledweyne waxaa aroornimadii hore ee saakay ka dhacay iska horimaad ay ku dhaawacantay laba qof. Iska horimaadka ayaana u dhaxeeyay Ciidamada Booliska iyo dhalinyaro deegaanka ah, oo sida la sheegay isa soo abaabulay.
Xaalad kacsanaan ah ayaa maanta laga dareemaya Magaalada Beledweyne, waxaana magaalada ka socdo bannaanbax looga soo horjeedo safarka lagu wado in maanta uu magaaladaasi ku taggo Madaxweyne Guudlaawe
Previous articleDadweyne diidan safarka Cali Guudlaawe oo xiray wadooyinka Beledweyne
Next articleWadooyinka Magaalada Beledweyne oo maanta xiran (SAWIRRO)